Ahoana ny fametrahana Xfce Desktop amin'ny AlmaLinux 8 - LinuxCapable
Apetraho ny tahiry EPEL
Mametraka Xfce amin'ny AlmaLinux
Fijerena Voalohany & Fanamarinana ny Desktop Xfce
Ahoana ny fanavaozana ny fonosana Desktop Xfce
Xfce dia tontolo desktop maivana malalaka malalaka ho an'ny rafitra fiasa mitovy amin'ny UNIX. Izy io dia natao ho haingana sy maivana amin'ny loharanon'ny rafitra nefa manintona hita maso noho ny tontolo desktop mahazatra izay alefa miaraka amin'ny ankamaroan'ny rafitra miasa. Ny Xfce dia tena malaza amin'ny rafitra taloha miaraka amin'ny hardware ho singa fototra amin'ny famolavolana azy dia ny fitahirizana ny fahatsiarovana sy ny tsingerin'ny CPU.
Amin'ity lesona manaraka ity dia hianatra ianao Ahoana ny fametrahana Xfce amin'ny biraonao AlmaLinux.
OS naroso: AlmaLinux 8.
Kaonty mpampiasa: Kaonty mpampiasa misy sudo tombontsoa or fidirana faka (su baiko).
Update your AlmaLinux rafitra fiasana mba hahazoana antoka fa ny fonosana rehetra efa misy dia tsy misy farany:
Raha hanangana kaonty sudo efa misy na vaovao dia tsidiho ny lesonay momba ny Ahoana ny fomba hanampiana mpampiasa amin'ny Sudoers amin'ny AlmaLinux.
Alohan'ny hametrahana ny desktop Xfce dia mamorona backups na drafitra raha tsy tianao izany ary te hiverina. Ny fanesorana ny tontolo Desktop rehetra dia mikorontana ary hitarika amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fampiharana kisendrasendra mbola napetraka. Amin'ny ankapobeny, dingana mafy ny fiverenana amin'ny fanjakana voalohany alohan'ny hametrahana ny fonosana, indrindra ho an'ny mpampiasa vaovao sy antonony.
Ny asa voalohany dia ny fametrahana ny EPEL (Package fanampiny ho an'ny Enterprise Linux) repository. Ity tahiry ity dia manana fonosana voatahiry ao amin'ny Red Hat Enterprise (RHEL).
Sokafy ny terminal, ary ampiasao ity baiko manaraka ity.
Ny asa faharoa alohan'ny hametrahana KFCE dia ny mamela ny fitahirizana fitaovana herinaratra. Izany dia mamela ny fampiasana ny fitaovana fitantanana fonosana Linux mahazatra anao, yum ho an'ny Red Hat Enterprise Linux sy zypper ho an'ny SUSE Linux Enterprise Server, hametraka ho azy ireo fonosana ilainao amin'ny filaharana takian'ny rafitra.
Tohizo ny fizarana manaraka amin'ny lesona ary apetraho Xfce.
Miaraka amin'ireo tahiry ilaina apetraka dia afaka manomboka mametraka ny birao hafa ho an'ny rafitra AlmaLinux 8 ianao izao.
Voalohany, ao amin'ny terminalo, ataovy azo antoka fa misy ny Xfce.
Tohizo ny fametrahana desktop Xfce miaraka amin'i Xorg.
Farany, mifidiana “Xfce Session” fa tsy ny default “Standard.”
Raha vao tafiditra ianao dia hahita fiovana vitsivitsy amin'ny UI ankoatry ny fiovan'ny loko sy ny fiaviana. Ny taskbar izao dia mitovy amin'ny karazana taskbar windows kokoa, miaraka amin'ny fampidirana bebe kokoa ao amin'ny zorony ambony havia sy havanana amin'ny serivisy misy ny fampisehoana fotoana.
Ary izany no izy, ary nahavita nametraka XFCE 4.16 desktop tamin'ny rafitra fiasanao AlmaLinux 8 ianao.
Ampandehano ny baiko fanavaozana dnf mahazatra ho an'ny fanavaozana ho avy ho an'ny tontolon'ny desktop Xfce miaraka amin'ireo fonosana default avy amin'ny App Stream.
Rehefa misy ny fanavaozam-baovao, dia mitovy amin'ny dingana ny fanavaozana.
Ao amin'ny lesona dia nianatra ny fomba fametrahana ny tontolo desktop Xfce amin'ny rafitra fiasanao AlmaLinux 8 ianao. Amin'ny ankapobeny, safidy matanjaka izy io ary amin'ny ankapobeny dia mifanaraka amin'ny famoahana farany avy amin'ny Xfce.
Ny tsara indrindra dia azonao atao ny mametraka ity fonosana ity ary mifamadika arakaraka ny fihetseham-ponao raha manana rafitra mendrika ianao. Raha tianao ny mitsambikina eo amin'ny desktop, dia ilaina ny manamarina raha manintona anao ny fijery. Manoro hevitra aho fa mety hametraka mampiasa VM aloha, avy eo amin'ny milina lehibe raha tsy azo antoka.
Sokajy AlmaLinux Tags AlmaLinux 8, Xfce Desktop Environment Post Fikarohana
Ahoana ny fametrahana MariaDB 10.7 amin'ny Debian 11 Bullseye